လင်းနစ်ဆာဗာ ဆိုတာ ................... — MYSTERY ZILLION
လင်းနစ်ဆာဗာ ဆိုတာ ...................
September 2008 edited September 2008 in Networking
လင်းနစ်ဆာဗာ ဆိုတာ ................... စာတွေ့ပြောမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် သိပ်တော့ဖတ်လို့ ကောင်းမှာမဟုတ်တာကို ကြိုတင်ပြီး တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိသလောက်ကိုပဲ အကျဉ်းခုံျး ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ သိတဲ့သူများ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပေးပါ။ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပြီး ပြင်ဆင်ပေးပါ။ ကျွန်တော်ပြောမယ့် ကိတ်စ တွေမှာ လင်းနစ်ဆာဗာ နဲ့ရှင်းမှရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒီ့ပြင် နည်းတွေ အများကြီး ရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်အခုပြောမှာ လင်းနစ်ဆာဗာ အကြောင်းဖြစ်လို့ ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲ ဦးတည်ပြီး ပြောလိုက်ပါတယ်။ အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ ဒေါင်းလုတ် ဆွဲတဲ့ပြသနာက လွယ်မလိုလိုနဲ့ တော်တော်ရှင်းရခက်တဲ့ ပြသနာပါ။ မဆွဲရဘူးလို့ ပြောလို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ စက် ၁ဝ လုံးမှာ ၅ လုံးလောက်က ဒေါင်းလုတ် ဆွဲနေပြီဆိုရင် ဆိုင်ရှင် ခေါင်းခဲပါပြီ။ အိုင်ဒီအမ် လို ဆော့ဝဲလ် မိုျးနဲ့ဆို ပိုဆိုးပါတယ်။ နောက်ပြသနာ တစ်ခုကတော့ မန်မိုရီ စတစ် ပြသနာပါ။ ဒီပစ်စီးက ဗိုင်းရစ် အများဆုံး ပြန့်ပွားရာ ပစ်စီး တစ်ခုဖြစ်လို့ပါပဲ။ အန်တီဗိုင်းရစ် အန်တီစပိုင်ဝဲလ် ဆိုတာကလည်း ပြီးပြည့်အောင် ကောင်းမွန်တယ် ဆိုတာမိုျးမှမဟုတ်တာ။ ဒီလို နေရာစုံက ပိုးမွှားပေါင်းစုံ သယ်ဆောင်လာတဲ့ စတစ်တွေကို လုံးဝ ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။အင်တာနက် ဆိုင်ဆိုတာ ဗိုင်းရစ် နဲ့တော့ မကင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလို စတစ် ထိုးပါများလာရင် ပြသနာ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ ရှိလာမှာပါပဲ။ နောက်ပိုင်း အန်တီဗိုင်းရစ် မမှီတဲ့ ဗိုင်းရစ်တွေ တရိုဂျန်တွေ အဖြစ်များလာရာမှာ .. နောက်ဆုံး ဖောမက် ချရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားတာတွေ ရှိပါတယ်။ စက်တစ်လုံးဖြစ်ရင် ကျန်တဲ့ စက်တွေအားလုံးကို ကူးသွားဖို့ဆိုတာ သေခြာသလောက်ပါ။ ဓိဖရိ ခံထားလို့တော့ ရတာပေါ့လေ။ ဒါဆိုရင် ဆာဗာကိုပါ ဓိဖရိ ခံထားရမှာပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကလိုင်းရန့် ကနေ ဆာဗာ ကို မကူးနိုင်ဘူးလို့ အာမ မခံနိုင်လို့ပါ။ ဆာဗာမှာ ဓိဖရိ ခံထားရင် စပိုင်ဝဲလ်တွေ ဗိုင်းရစ်တွေ နဲ့ အခြား ဆော့ဖ်ဝဲလ် တွေကို အပ်ဒိတ် လုပ်တဲ့အခါကျရင်တော့ နည်းနည်း လက်ဝင်ပါတယ်။ တစ်ရက် နှစ်ရက်က အကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် နေ့တိုင်းကျတော့ တော်တော် စိတ်မရှေချင်စရာပါ။ ဒီတော့ စတစ် မထိုးနဲ့လို့ ပြောလို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ တစ်ခိုျ့က ဆာဗာမှာ လာထိုးပါလို့ ဆိုပါတယ်။ ဟာ့ဝဲလ် ကော ဆော့ဖ်ဝဲလ် ပါ ခံပြီးတော့ သုံးကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ လင်းနစ်ဆာဗာ ကတော့ သူ့ထက် ပိုပြီးသေချာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဝင်းဒိုး မှာ ရမ်း တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ တော်တော်များများက လင်းနစ် မှာ မရမ်းလို့ ဖြစ်ပါတယ်။လင်းနစ်ဆာဗာမှာ လုပ်နိုင်တာတွေထဲက အသုံးဝင်တာလေးတွေကို ပြောပြပါ ဦးမယ်။ ဘမ်းဝတ် ကို ပိုင်းလို့ရခြင်း။ ဥပမာ - ၅၁၂ ရှိတာကို ၂၅၆ နှစ်ခုပိုင်းလိုက်ပါတယ်။ တစ်ပိုင်းက ဒေါင်းလုတ်ဆွဲဖို့ ၊ တစ်ပိုင်းက ရိုးရိုးသုံးဖို့ပါ။ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲမယ့်သူမရှိရင် ၅၁၂ ကိုပဲ ခွဲသုံးကြပါတယ်။ ရှိလာခဲ့လို့ရှိရင်တော့ ၂၅၆ တစ်ပိုင်းထဲက ခွဲသုံးကြရပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၂၅၆ တစ်ပိုင်းကို ဘယ်လိုမှ မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး။ ဒေါင်းလုတ် ဖိုင်ဆိုက်ကိုလည်း လစ်မတ် လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ ၅ဝ မက် ထက်ကျော်ပြီး မဒေါင်းစေချင်ရင် လစ်မတ်ကို ၅ဝ မက် လို့ ထားလိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါထက် ပိုကြီးတဲ့ ဆိုက်တွေကို ဆွဲချင်ရင် ဆာဗာကို လာပြောရမှာပါ။ အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက်က ဖိုင်တစ်ခုကို လင့်တစ်ခုကနေ ဒေါင်းလိုက်ပြီး နောက်တစ်ယောက်က အဲ့ဒီလင့်ကနေပဲ အဲ့ဒီဖိုင်ကို ထပ်ဒေါင်းမယ်ဆို ကော်ပီပေ့စ် လုပ်သလောက်ပဲ ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒေါင်းသမျှဖိုင်တွေကို ဆာဗာမှာ စေ့ လုပ်ထားလို့ပါပဲ။ မဆိုင်တာပြောရရင်... ဒီနည်းနဲ့ မသိတဲ့သူတွေကို အသုံးချပြီးတော့ ဆိုင်နံမည်ကို ကြော်ငြာလို့ ရပါသေးတယ်။ ၁ ဂစ် လောက်ရှိတဲ့ ဖိုင်တစ်ခုကို ကိုယ့်ဖာကိုယ် ဒေါင်းလုတ်ဆွဲထားပြီး လာတဲ့ ကတ်စတမ်မာ တစ်ယောက်ကို အဲ့ဒီလင့်လေးကို ပေးပြီး ဆွဲခိုင်းလိုက်ပါ။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဂွင်ထဲကို ဝင်ပါပြီ။ တွေ့တယ်မဟုတ်လား ငါ့ဆိုင်က ၁ ဂစ် လောက်ရှိတဲ့ဖိုင်ကို မိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲ ကြာတယ် စသည် ဖြင့်ပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် သိတဲ့လူကိုတော့ သွားမလုပ်မိပါစေနဲ့။ မသိတဲ့လူကို ပြောရင်သာ ဒီဆိုင်က ဆရာကြီးပဲ လို့ ပြောခံရမှာပါ။ သိတဲ့လူကို သွားပြောမိရင်တော့ ဒီဆိုင်ကလူကြီးက ပေါတောတောနဲ့ ရူးနေတဲ့လူကြီးပဲ ဆိုပြီး မဆုံးတမ်း ဖွခံရမှာပါ။ မသေခြာပေမယ့် အခုလောလောဆယ် အခြေအနေကို ကျွန်တော် ကြားမိသလောက် ပြောပြပါဦးမည်။ သေတော့မသေခြာပါ။ သေခြာတဲ့သူတွေ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပေးပါ။ လင်းနစ်ဆာဗာ ကိုအွန်လိုင်းကနေ ဝယ်သုံးရင် ဒေါ်လာ ၆ဝ ခန့်ရှိတယ် ၊ မြန်မာဆားဗစ်ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ရင် တစ်သိန်းခွဲ ခန့်ရှိပြီး လစဉ် မိန်းတမ်းနန့် ကြေး တစ်သောင်းခွဲလောက် ပေးရတယ််လို့ ကြားမိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စီဒီ ဝယ်ပြီး တင်လို့လည်း ရမှာပါ။ အခုလောလောဆယ် ဦးနှောက်ထဲကနေ ထွက်လာသလောက် ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။
ကျွန်တော့အနေနဲ့ကတော့ နည်းပညာမနိုင်ရင် မသုံးစေချင်ပါဘူး... တကယ့် ISP ကြီးတွေမှာပဲ သုံးကြတာပါ... နောက်ပြီး Linux server ထားလိုက်တာနဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်ဆိုရင် Internet server ကတစ်လုံး... Cybercafe Management Software အတွက်ကတစ်လုံး ထားရတော့မှာပါ... ငွေရေးကြေးရေးအဆင်ပြေရင်တော့ အဲလိုထားနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပေါ့...
တကယ်လို့ Linux တစ်လုံးထဲ ပေါင်းထားလိုက်ရင် တော်တော်ဒုက္ခများမယ်ဗျ... file sharing, printing, cd burning,... windows နဲ့ linux ကြားထဲမှာ အဆင်ပြေအောင် တော်တော် configure လုပ်ယူရမယ်.. တော်ရုံ knowledge နဲ့တော့ မလွယ်ဘူး...
ကျနော့သူငယ်ချင်းဆိုင်မှာ အဲလိုထားမလို့ Linux ကို စမ်းဖူးပါတယ်... လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လ လောက်ကပေါ့.... အဲကျမှစသုံးဘူးတာပါ... ဘယ်လောက်ထိဆိုး တုန်းဆိုရင် တင်ပြီးပြီးချင်း.. အပြင်သွားစရာပေါ်လာတော့ shutdown မချတတ်လို့ တခြားစက်ကိုသွားပြီး.. google ရပါသေးတယ်...
နောက်တော့ ဘယ်ရမလဲ.. Router တွေကို configure လုပ်သလိုမျိုး web-based နဲ့ Linux administration လုပ်လို့ရတဲ့ဟာ ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုပြီး ရှာလိုက်တာ Webmin ကိုသွားတွေ့ရော.. ဟီး.. ဟီး.. ကိုယ်က GUI သမားဆိုတော့.. အဲဒါလဲရရော အကုန်ရှောက်စမ်းတာ.. ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Services တော်တော်များများ တစ်ညနဲ့တော့ရသွားတယ်...
အဲလိုနဲ့ နောက်နေ့ စမ်းသုံးတာပေါ့... နောက်တော့ Performance လဲသိပ်မကွာတာရယ်... Troubleshoot ချက်ချင်းမလုပ်နိုင်တာရယ်ကြောင့် (ကျနော်လဲ အမြဲရှိမနေနိုင်တာကြောင့်) ISA 2006 ကိုပဲပြန်သုံးပေးခဲ့ပါတယ်....
တကယ်ပါ... Microsoft ရဲ့ product တွေက ဘယ်လိုပဲ Security မကောင်းဘူးပြောပြော.. သုံးရတော့ တော်တော်လွယ်တာ ငြင်းလို့မရဘူး... ISA 2006 ကို down ပြီးပြီးချင်း install တန်းလုပ်.. ဘာစာအုပ်၊ ဘယ် help file မှဖတ်စရာမလို၊ google စရာမလိုဘဲနဲ့ကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ configuration တန်းရသွားတာပါပဲ.. ပြသနာတတ်လာရင်လဲ ဖြေရှင်းရလွယ်တယ်...
ပြီးရင် Linux ကိုစမ်းဖို့က Requirement တော်တော်များတယ်... စက်ကောင်းကောင်းလိုတယ် ဒါမှ VMware နဲ့ စမ်းနိုင်မှာ (နို့မို့ဆို OS ပြောင်းချင်ရင် restart ချချနေရတာနဲ့ သေချင်စော်နံလာမယ်) နောက်ပြီး Internet connection လိုမယ်.... Linux က ဘာတဲ့ဆို Online ပေါ်သွားခိုင်းတော့တာပဲ....
Linux ကတော့ ကွန်ပျူတာကို သာမန်ယူဇာ အဆင့်ထက် ပိုပြီး နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သိချင်တဲ့သူတိုင်း လေ့လာထားသင့်ပါတယ်... ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ လေ့လာနေဆဲပါ... သုံးရင်တော့ သူနေရာနဲ့သူ သုံးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ.... နိုင်နင်းတဲ့ ပညာရှင်မရှိရင် အကျိုးမဖြစ်ဘဲ၊ အပြစ်ဘက်မှာပိုများတတ်ပါတယ်...
အဲ သူ့နေရာနဲ့သူသုံးဆိုမှ တစ်ခုသတိရလို့ ပြောပါဦးမယ်.. ဆိုင်တော့မဆိုင်ပါဘူး.... ကျနော်တော်တော် အမြင်ကတ်နေတာလေးတစ်ခုပါ... ကွန်ပျူတာလေး ၁၀ လုံး၊ ၁၅ လုံးလောက် (mobile/laptop user မပါ) ရှိတဲ့ Network ကို DHCP နဲ့ IP configuration ပေးတာပါပဲ.... မလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာတွေ ခဏခဏပေးပါတယ်....
Linux Server နဲ့ Windows Server မှာ Linux Server ကိုအသုံးပြုတာ ပိုမိုများပြားလာပါတယ်။ဘယ်အချက်တွေ အရမ်းကွာနေပါသလဲ။Linux Server ကဘာတွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလို့လည်း။Windows Server မှာကော လုပ်လို့မရဘူးလား။ပိုက််ဆံကုန်သက်သာ လို့လား။Linux Server အကြောင်းရှင်းပြပေးပါဦး။
Linux ကိုတော့ run အောင် လုပ်တက်တယ် ... အဲ error ဖြစ်ရင် လုပ်တက်ဘူးကွာ ........
ဘာညာလေးလဲ တက်တယ် .... တစ်ကယ်တော့ Linux ဆိုတာ မြန်မာနဲပ သင့်တော်တယ်လေ ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ သိတယ်မဟုတ်လား microsoft ထက်စျေးပေါတယ် ..... system ငြိမ်တယ် ...... requirement သိပ်မလိုဘူး ........ အဲ Technical တော့ လိုတာပေါ့ ..... linux ကသိပ်မဟန်းဘူးပြောတယ် ကျွန်တော် သုံးတာ နည်းနည်း ဟန်းပါတယ် .... စက်မနိုင်လိုလဲ ပါလားမသိဘူး ...... GUI ပါ ပေါင်းသုံးတာ ကျွန်တော်က
.. Linux hang ရင် ငိုလောက်တယ်....ဘာဖြစ်မှန်းကို မသိလို့...ပြသနာအားလုံးလိုလိုကတော့
Online repositories တွေကနေ...latest Package တွေဆွဲချရဖို့ internet ကောင်းကောင်းလိုတယ်။
ွွGNome တို့ KDE တို့version မြင့်လာရင် graphic memory လိုလာတယ်...နှေးလာနိုင်တယ်။
Compiz Fusion လို FX တွေသုံးချင်ရင်....တော့ RAM ကော Graphic ကောလိုလာရော။
ကျွန်တော်တော့ Server ကို CentOS ကိုသုံးပါတယ်။
Desktop ကိုတော့ OpenSuse ကိုသုံးပါတယ်။
.. Linux hang ရင် ငိုလောက်တယ်....ဘာဖြစ်မှန်းကို မသိလို့...
အဲတာတော့ ဟုတ်တယ်ဗျို့။ ကျွန်တော့် Notebook မှာ Ubuntu တင်ထားတာ တစ်ခါတစ်လေ Hang Hang သွားတယ်။ အထူးသဖြင့် သီချင်းဖွင့်တဲ့အခါမျိုးမှာ။ အဲဒီအချိန်ဆိုရင် ဘာ Linux လဲ ၊ ပြောတော့ Crash ကင်းတယ်ဆို။ စိတ်ထဲက ကျိန်ဆဲမိတယ်။
Linux..server ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ...ဘယ်မှာရနိုင်တလဲ....download လုပ်ချင်လို နော်...
GUI မလိုချင်ဘူး....တကယ် command ပဲလိုချင် တာ...စမ်းချင်လွန်းလို နောက်ပြီး computer တလုံးကပိုနေ လို 98 windows နဲ့ ဒါကြောင့် Linux command သင်လိုရသည်မလား
If you want to test use redhat linux it include both server and desktop in an CD. In my advice there is no error free computer system all over the world and in my test results both linux and windows, unix all will hang or happen errors if you install/uninstallalot on servers, if u run memory comsumptions applications on servers then can't avoid for hang or errors or server down problems. May be you think I am bluffing no not because I havealot experienced on servers and users problems.:((
ကောင်းပါတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ အရင်က developmer တွေ ပြောတဲ့စကားပါ.. ကျွန်တော်တို့လို End user တွေ GUI ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ဖက်ပြီး ကြီးသူတွေကတော့ မကြိုက်ကြပါဘူး.. Linux GUI ကြီးတွေ ထွက်လာသည့်တိုင်ပေါ့...
တကယ်တော့ကောင်းတယ်ဗျ... Windows မှာ မလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်နိုင်စွမ်းပါတယ်.. ကွာခြားချက်ကတော့ command line နဲ့ GUI ပါပဲ... ဘာလဲ သက်သေပြဆိုရင်တော့.. အဲ အဲ.. Linux/Unix command line ကိုလေ့လာ ပါပဲ ပြောကြည့်ချင်တယ်...
e-books တစ်ခုထဲမှာ author တစ်ယောက် မှတ်ချက်ပြုတာကို မှတ်ဖူးတယ်.. ငယ်ငယ်က စာသင်ရင် ရုပ်ပုံ ကားချပ်လေးတွေ ကြည့်ပြီးစာသင်တယ် မဟုတ်လားဗျ..။ ကြီးလာတော့ အဓိက အရေးအဖတ် သင်တယ်ဗျာ။ Windows ကိုလည်း ကလေးတွေပဲ သင်တာပေါ့။ ;P နာပြောတာ ဟုတ်ဘူးနော်..:D ။ ကြီးလာရင်တော့ အရေး/အဖတ် ဖြစ်တဲ့ linux command ကိုလေ့လာသင့်တယ် လို့သူဆိုပါတယ်။